आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ आषाढ १७ गते मङ्गलबार - समृद्ध नेपाल
विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधूप गर्नु पर्नेछ । यात्रा रमाइलो हुनसक्छ । उपहार प्राप्त हुने सम्भावना छ । स्वास्थ्यमा अचानक सानो समस्या देखिन सक्छ, तर डराइहाल्नु पर्दैन । आफन्तहरूबाट भनेजस्तो सहयोग नपाइएला, तर काममा बाधा हुनेछैन । छात्रछात्राको साथीहरूसित मनोरञ्जनको अवसर जुर्नेछ । प्रयाससाध्य समय छ धैर्य गरी मिहिनेत गरेमा मात्र कार्यसिद्धि हुनसक्छ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुने छ । आत्मविश्वास जाग्नेछ । अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्नसक्छ । कर्मचारी र कामदारका लागि श्रममूलक काममा मन जानेछ । स्वास्थ्य सबल रहने छ । व्यवसाय बढाउने वा नवीन रोजगारीको अवसर आउने छ ।
मद्दत लिन चाहनेको सेवा गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ । पारिवारिक सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्ने छ । जीवनसाथी वा बालबच्चालाई समय प्रदान गर्ने दिन हो, तिनीहरूको भावना बुझ्ने प्रयास हुनेछ । अभिभावक वा इष्टमित्रको शुभकामना र सहयोग प्राप्त हुनेछ । छात्रछात्राले प्रयास गरेका काममा शुभफल प्राप्त हुनेछ । गरेका काममा भाग्यले साथ दिनेछ । गृहिणीहरूको धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा रुचि बढ्ने छ । कर्मचारी र कामदारका लागि सामाजिक यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । रोकिएका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । व्यवसायीहरूका लागि आस मारेको काम पनि पूरा गर्ने साहस र हिम्मत पलाउने छ । नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ हुनसक्छ ।
प्रेमसम्बन्धमा निरसता छ । प्रायः सबैका लागि शरीरमा आलस्य र थकानको अनुभव हुनेछ । स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत हुनुहोला । आठौं घरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले किसिमकिसिमका समस्याहरू निम्त्याउनसक्छ, झैझगडा र मुद्दामामिलाभन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ । यात्रा घातक बन्न सक्छ, लामो दूरीको यात्रा प्रारम्भ गर्नु हुँदैन । तपार्इंको व्यक्तिगत दृष्टिकोण उल्टो हुने देखिन्छ, बोले/भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्न सक्छ । धन, धर्म र भाग्यमा हानी पुग्ने सम्भावना छ । गर्नु नपर्ने काम पनि बढी समय लगाएर गर्नु पर्ला । अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । छात्रछात्रा तुजुक देखाउने काममा मन लगाउने छन् । प्रतिकूल समयले घेरेको छ, संयम रहनु होला ।
मायाप्रेम, रतिराग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ । विपरीतलिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ । गृहिणीहरूमा पति, परिजन र सन्तानपक्षको सहयोग मिल्नेछ । कर्मचारीहरूले प्रशंसा, बढुवा वा जिम्मेवारी पाउने समय छ भने छात्रछात्राका लागि हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ । प्रायः सबैको परिवारजन र आफन्तजनसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ, तपाईंका विचार र भावनामा उनीहरू सकारात्मक देखिने छन् । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ । आज पति वा पत्नीको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यवसायबाट लाभ लिन सकिने छ ।
आज आमा वा मामाको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । छात्रछात्राका लागि सिर्जनात्मकता र व्यवहारिकतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ । गृहिणीहरूले लामो समयदेखि देखिएको घरायसी समस्या समाधान गर्नेछन्, माया र प्रेमको वातावरण तैयार हुनेछ । प्रायः सबैका लागि तर्क, विवाद र झैझगडा जस्ता क्षेत्रबाट लाभ मिल्ने समय छ । आवश्यक र उपलब्धीमूलक रमाइलो यात्रा हुनसक्छ । दूरदराजको यात्राको सम्भावना छ । वैदेशिक प्रयोजनका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत यो राम्रो समय छ । ऋणसापटी लिनदिन आजको दिन अनुकूल छ । पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहने छ ।
आज खासगरी पठनपाठनमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि राम्रो दिन छ । पठनपाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मानसम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ । अध्ययन, अध्यापन र लेखनकार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ । गृहिणीहरूलाई भाइबहिनी र छोराछोरीले सहयोग गर्नेछन् । आफन्तले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् । घरपरिवारमा रमाइलो जमघट हुने छ । तपाईंले गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन् र साँझमा दिनभरिका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न मन लाग्नेछ । बन्दव्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूले समय खेलबाड र मोजमज्जामा बिताउनु हुँदैन, नत्र झमेलामा पर्न सकिन्छ ।
यमपञ्चकको तेस्रो साँझ लक्ष्मीको पूजा गर्दा झुक्केर पनि नगर्नुस् यी ६ गल्ति ! नत्र असुभ हुनेछ ! –
तमु ल्होसारमा सार्वजनिक विदा नदिएको भन्दै तमू समुदायद्वारा आपत्ति !
बुधबार कुन भगवानको व्रत बस्ने जसले गर्दा धन, बुद्धि र व्यापार वृद्धि हुन्छ ! जन्नुहोस
यी ४ महिनामा जन्मिएका महिला माता लक्ष्मीका प्रिय हुन्छन् !
हिन्दू धर्ममा मंगलबार किन विषेश छ ? जान्नुहोस
भोलि दशैको टीका साइत सार्बजनिक पुरा पढ्नुहोस !
गुरुङ समुदायको तमु ल्होसारको रमझम २५ तस्बिरमा हेर्नुहोस् !
कुलुङ समुदायमा चाक्चाकुरको रौनक !
अब छठको रौनक शुरु !
अन्जु पन्तले सार्वजनिक गरिन आफ्नो हुनेवाला श्रीमान
बारपाकीलाई लाहुरेको कोशेली ‘टुकु कर हो यो ? जन्नुहोस
वर्षाले ढल्यो सिंहदरबारको पर्खाल